बलिउडमा नातावादको चर्को बहस, सुशान्तले आत्मह-त्या गर्नुको कारण यस्तो हुनसक्छ ! – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/बलिउडमा नातावादको चर्को बहस, सुशान्तले आत्मह-त्या गर्नुको कारण यस्तो हुनसक्छ !
बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको आत्महत्या पछि बलिउडमा हुने गरेको नातावाद र सिण्डिकेटको बिषयलाई लिएर चर्को बहस शुरु भएको छ।
मुम्बईमा ठूलो सिन्डिकेट चलिरहेको छ। त्यहाँ नातावाद हावी छ। सुशान्तलाई बहिष्कार गर्ने वा फिल्मबाट निकाल्ने निर्माताहरूविरुद्ध आत्मह-त्याका लागि उक्साएको लगायतका आ-रोप लगाउन थालिएको छ। सुशान्तले आत्मह-त्या गर्नु यसैको उपजको रुपमा धेरैले ब्याख्या गर्न थालेका छन्।
पेशाको हिसावले पनि व्यक्तिहरुमा आत्मह-त्याको जोखिम बढी हुन्छ। तनावपूर्ण पेशा अंगाल्ने व्यक्ति अरु पेसामा भन्दा आत्मह-त्याको जोखिम बढी हुन्छ।
मानसिक स्वास्थ्य समस्याका बारेमा जनचेतनाको ठूलो आवस्यकता देखिन्छ। डिप्रे-सन तथा आत्मह-त्याका विषयमा सत्य तथ्य जानकारी दिन सके तथा यस बिषयमा बहस र छलफल अगाडि बढाउन सके यस्ता दुखद घटनाहरुलाई कम गर्न सकिन्छ।